” ဝ ” မှာ ငွေစက္ကူ ထုတ်နေပြီ ဟူသော သတင်းမှား ဖြန့်ချိ – Nyang Media
TAI History / TAI History ပေ့ချ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဓာတ်ပုံ
” ၀ ” မှာ ငွေစက္ကူ ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေနေပြီဆိုတဲ့ သတင်း တစ်ပုဒ်အကြောင်း ပြောပြလိုပါတယ်။
သည်သတင်းကို TAI History ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ် မှာ ဇူလိုင်လ (၂၀) ရက်နေ့ မနက်မှာ တင်ထားတာပါ။ သည် သတင်းကို မျှဝေသူ ၂၀၀၀ နီးပါး ၊ မှတ်ချက်ပေးသူ တစ်ရာနီးပါးရှိပြီး React ပြုသူ တစ်ထောင်နီးပါး ရှိပါတယ်။
ဒါတွေက တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း သဟဇာတ မဖြစ်တဲ့အပြင် ဒေသအတွက်လည်း ထိခိုက်တယ်။အကျိုးလည်း မရှိဘူး …
TAI History ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ် မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ” ၀ မှာ ငွေစက္ကူ ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေနေ “ သတင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ကာ သတင်းအမှား၊အမှန် အချက်အလက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ သတင်းအမှား သာ ဖြစ်တယ်လို့ ဝပြည် သွေးစည်းညီညွှတ်ရေး ပါတီ (UWSA) ရဲ့ လားရှိုးမြို့ ဆက်ဆံရေးရုံး တာဝန်ခံ ဦးညီရမ်း က ငြမ်းမီဒီယာ ကို အတည်ပြု ပြောကြားပါတယ်။
TAI History ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ် မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းအမှား မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဝ က ငွေစက္ကူရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါပြီ
တရုတ်ဘဏ်မှာ ရွှေအပေါင်ထားပြီး ငွေလဲလှယ်မှု့မှာ ဝ ငွေ ၁၀၀ တန်တစ်ရွက်ဟာ မြန်မာငွေ ၂၀၀၀၀ကျပ်နဲ့ ညီမျှတယ်လို့ သတ်မှတ်သတဲ့…
ဝ ဟာ ရှမ်းပြည်နယ်ထဲက တိုင်းရင်းသားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ နယ်မြေတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်အဆင့်တောင်မရှိပါဘဲ… ကိုယ်ပိုင် စစ်တပ် ရဲတွေဖွဲ့စည်းထားပြီး တရုတ်ဘာသာ ဝ ဘာသာ ကိုပဲသုံးတယ် ။
မြန်မာအစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ယောက်မှ အဝင်မခံဘူး ။ခန့်ထား တာဝန်ချထားလို့မရဘူး
မြန်မာစစ်တပ် တပ်မှူး တိုင်းမှူးတွေဟာ ကြိုတင်အကြောင်းကြား သဘောတူညီမှု့မရှိပဲ သွားလာလို့မရဘူး ။
အခု ငွေစက္ကူပါ ထုတ်နေပြီ ။
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ကဘာလုပ်မှာလဲ ?
ဒို့ပြည်ကိုတစ်လက်မမှ အထိမခံဆိုသူတွေဘာလုပ်မလဲ ?
ငွေစက္ကူမှာ ရေးထားတာ ဝ အစိုးရဆိုပဲ ..
“ အခုဖေ့ဘွတ်ခ်ထဲကနေ ကောလာဟလတွေ ပေါက်ကရတွေက ပုံရိပ်ကျဆင်းအောင် ရည်ရွယ် ချက် ပါ။ ဒါတွေက တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း သဟဇာတ မဖြစ်တဲ့အပြင် ဒေသအတွက်လည်း ထိခိုက်တယ်။အကျိုးလည်း မရှိဘူး “ လို့ သတင်းအမှားတွေ ဖြန့်ချိ နေမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးညီရမ်း က မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
အဖက်ဖက်က ရင်ကြားစေ့ရေး ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး၊ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာတည်မြဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး နိုင်ငံမှာ မဖြစ်မနေလိုအပ်နေချိန်၊ ကြိုးစား တည်ဆောက် နေချိန်မှာ ဒီလို အခြေအမြစ် မရှိ တာတွေ လျှောက် လုပ်နေတာတွေကို ရှုတ်ချတယ်လို့ ၀ အမျိုးသားပါတီ ရဲ့ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဆိုင်လတ်က ငြမ်းမီဒီယာ ကိုပြောပါတယ်။
သည်လို သတင်းအမှား ဖြန့်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ မကောင်းတဲ့ အပြင် မလုပ်သင့်ဘူးလို့ လည်း ၀ အမျိုးသားပါတီ ရဲ့ ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူ ဦးဆိုင်လတ်က ဆိုပါတယ်။
Tags: ၀, factcheck, ငွေစက္ကူ, သတင်းတု, သတင်းအမှား
ဒေါ်စန္ဒာမင်း ရွေးကောက်ပွဲမဝင်တော့သည့် ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုတွင် ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ ယှဉ်ပြိုင်မည်